Ugbu a dị na Storelọ Ahịa Play nke ngwa ejiji maka nzacha: Prisma | Gam akporosis
Ngwa ndị dị elu dị elu na-esite na iOS ma anyị ejiri ya na ngwa ndị ahụ na-anakọta ihe ịga nke ọma na OS maka ngwaọrụ mkpanaka, na-erute igwe anyị. Otu n’ime ha bụ Prisma, nke anyị na ya nwere izu gara aga n’ụdị beta ọha na eze, ma gịnị abali abali, ha mechiri uzo ịhapụ anyị ịchọrọ itinyekwu nke nzacha ndị ahụ dị ebube. Ikekwe ndidi nwere ike, mana n'ime otu izu anyị nwere ya dị na gam akporo ọzọ.
Na oge a ọ bụ site na Playlọ Ahịa Google Play ka onye ọ bụla nwee ike ibudata ngwa a nke na-arụ ọrụ dị egwu na nzacha. Ọ bụ ezie na imirikiti ngwa eji eme ihe maka nzacha, dịka Pixlr ma ọ bụ Instagram, na-etinye otu ihe onyonyo ahụ, Prisma na-eji ya algọridim ka "ihu" ihe di na ihe oyiyi ma tinye nzacha nke fọrọ nke nta ka ọ gbanwee onyinyo ahụ ma ọ bụ foto dị ka ọrụ aka gị dịka ị nwere ike ịhụ mgbe ị nwara ya.
Prisma abụghị ngwa nwere ụdị niile nke nhọrọ dị elu Gbanwe ihe ọ bụla dị na foto ahụ, mana ọ bụghị nke ahụ, ọ dabere na nhọrọ ụfọdụ dị oke mkpa iji wepụta etu ngwa ahụ si dị ike: ihe nzacha ya. Ndị a ị ga-enwe maka ihe niile kpatara na ọ bụ ezie na ọ nweghị narị otu narị n'ime ha, ndị ọ nwere dị ezigbo mma.
Bugote ihe oyiyi ma ọ bụ see foto, ọ na-egosi nhọrọ bugharia ihe oyiyi na n’ikpeazụ ị na-aga nyo nhọrọ. Apply na-etinye otu, jiri mmegharị ahụ ị nwere ike mesie ma ọ bụ belata nzacha etinyere. Ọ bụrụ na ịmara otu esi eji mmịfe mmetụta a nke ọma, ịnwere ike ijikọta ihe oyiyi dị iche iche dị iche iche nke anyị mepụtara, yabụ nchikota nwere ike ịmetụta ma ọ bụrụ na anyị nwere obere okike na talent maka ya.
I nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google Ọ dịghị mgbasa ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla na ígwé ojii na oké ọrụ ahụmahụ awa site a oké foto retouching ngwa. Dị mkpa maka oge a n'afọ.
PS: have gwala anyị n’ihe ị na - enweta ozi enyo na ihuenyo ekpuchi, ị nwere ike idozi ya na njikọ gara aga.
Budata ngwa ahụ ebe a.
Onye nchịkọta akụkọ foto Prisma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Prisma, ngwa ejiji maka ihe nzacha nka, dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google
site na oge ikwesiri izipu foto gị ka hazie ya, ọ nweghịzị ntụkwasị obi na ngwa ahụ, na-ehichapụ ozugbo
Zaghachi Salvador Esparza
Mgbe ị na-agba ya na oge izizi, enwetara m “ozi machie achọpụtara” ozi, kedu ka m ga-esi gbanyụọ ya.
Huawei na-aga Apple, ọnụ ọgụgụ ego ya na-ebili 40%